Lawula ibhodi eqhotyoshwayo ngekopi kwaye uncamathisele iwijethi | IPhone iindaba
Ukulawula umxholo esikukopa kwibhodi eqhotyoshwayo ngoku kulula kakhulu enkosi kwi Iwijethi ethile ye-iOS 8 okuleVenkile yeApple.
Este Khuphela iwijethi yokuncamathisela idityaniswe kwiziko lezaziso kwaye isinika ukufikelela ngokukhawuleza kwisicatshulwa kunye nemifanekiso esiyikhuphele kwisixhobo, konke kube lula ukungavuli isicelo ngokwaso ukuze sikwazi ukubona umxholo kwibhodi eqhotyoshwayo.
Olunye uncedo lwale widget kukuba inembali Ngezinto esizikopa kwibhodi eqhotyoshwayo, ke sinezinto ezininzi ezikhoyo ngaphandle kokuba zibhalwe ngaphezulu njengoko kuqhele ukwenzeka.
Ukuba sinomdla Cola enye yezi zinto kwi-app ikhonkrithi, silula nje iziko lezaziso, yenza ushicilelo olufutshane kwinto enomdla kuthi kwaye ke iya ngqo ngqo kwibhodi eqhotyoshwayo. Ngoku siya kweso sicelo apho sifuna ukunamathisela umxholo, senza umatshini omde ukuze i-iOS isinike ukhetho lokuncamathisela kwaye yiyo loo nto.
Ewe, njengoko umxholo wewijethi ungasasebenzi kuthi, singayisusa kuye musa ukuqokelela umxholo ogqithisileyo ukuze singaze siphinde sidinge.
Ixabiso nge I-1,79 i-euro, Ikopi kunye nokuncamathisela iwijethi kunokuba sisalamane esikhulu ukuba sisebenzisa ibhodi eqhotyoshwayo rhoqo, ngakumbi kwiiprosesa zamagama, usetyenziso lweposi okanye okufanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Lawula ibhodi eqhotyoshwayo ngekopi yokuncamathisela iwijethi
I-CLIP isimahla kwaye yenza okufanayo.
Isicelo ewe, imisebenzi ye-PRO ixabisa i-euro ezi-1,79
Iscreen se-IPad Air 2 sinokubangela iingxaki